Solari oo si weyn u amaanay Benzema, xili uu iska indho tiray Isco, kahor kulanka caawa ee Espanyol – Gool FM
Solari oo si weyn u amaanay Benzema, xili uu iska indho tiray Isco, kahor kulanka caawa ee Espanyol
(Real Madrid) 27 Jan 2019. Macalinka kooxda Real Madrid Santiago Solari ayaa kasoo hor muuqday shir jaraa’id si uu kaga hadlo arimo quseeya kooxdiisa kahor kulankooda 21-aad horyaalka La Liga ay caawa kula ciyaari doonaan kooxda Espanyol.
Waxyaabihii ugu muhiimsanaa uu macalinka reer Argantina ee Santiago Solari kaga hadlay shirkan jaraa’id ayaa waxaa ka mid ahaa:
“Waxaan u baahanahay kulankan inaan sameyno, sida kulamadii dhawaa ee lasoo dhaafay, waxaan u baahanahay awood kasta ee aan u soo adeegsanay labadii kulan ee lasoo dhaafay”.
“Waxaan isku dayayaa inaan ku wajahno cayaarta soo socota awoodeena oo dhan si aan u xaqiijino guul, waa waxa aan isku dayeyno inaan sameyno”.
“Ma fududa marka ay jiraan ciyaartoy badan, Ma ahan wax sahlan sababtoo ah dhamaan ciyaartoyda waxay doonayaan inay ciyaaraan taasna macquul maaha”.
“Benzema wuxuu qaadanayaa waqti aad u fiican, wuxuu soo bandhigayaa xili ciyaareed weyn, waa ciyaaryahan aad u wanaagsan oo fahamsan kubada cagta, wuxuu ka dhigaa kuwo fiican ciyaartoyda ku hareereysan, wuxuu sameynayaa dadaal badan oo isku dhafan kulamada uu ciyaaray, wuxuu ciyaarayaa isaga oo xanuunsan gaba gabada hadalka”.
Intaas kadib Santiago Solari ayaa waxaa wax laga weydiiyay arinta Isco, balse wuxuu doorbiday inuu iska indho tiro wuxuuna yiri:
“Dagaalka kaliya ay kooxda wajahayso waa kulanka soo socda, waxaan ku wajihi doonaa koox ahaan, hada waxaan ku dhow nahay dhamaanteen, kooxda waa mid dhameystiran, waxaa naga maqan Keylor Navas iyo Jesús Vallejo, waxaan doonayaa in qof walba uu dib u soo laabto kulamada Janaayo iyo Febraayo, waxaan diirada saari doonaa kulanka soo aadan”.
“Espanyol waa koox qaabeysan, waxay heystaan ciyaartoy aad u dhakhso badan. Waxay heystaan natiijooyin aan fiicneyn, laakiin Koox kasta way ku dhaawici kartaa wakhti kasta”.
Kulamada Maanta la ciyaarayo FA Cup, Serie A, La Liga iyo Saacadaha dhankeena laga Daawan doono
“Solskjær wuxuu ku adkeenayaa xaalada maamulka kooxda Manchester United”